Iindaba - Iphaneli yokuhlamba VS Intloko yokuhlamba ngesandla
Ngapha koko, kubasebenzi baseofisini, eyona ndlela yokufumana ukudinwa ngosuku oluxakekileyo kukuthatha amanzi ashushu xa ufika ekhaya. Ke xa kufikwa kuukuhlamba, emva koko kufuneka sithethe ngezixhobo zokuhlamba, kuba ngoku iimeko zokuphila zingcono, indlela yokuphila yabantu itshintshile, ke izixhobo zokuhlamba ziye zahluka. Ndihlala ndisebenzisa olona lusebenzayo ekhaya nguishawa intloko, kodwa enyanisweni, ukongeza kwishawari, kukho imveliso yodidi, yeyona nto ishawa iphaneli. Xa kuthelekiswa neshawa yemveli, ishawaiphaneli inomoya ophezulu. Kuphela ayinguye wonke umntu oyithandayo. Kwaye abanye abantu kumhombiso wegumbi lokuhlambela, ishawaiphaneli kunye nokuhlamba intloko okungcono, uhlala uziva ungakwazi ukwenza isigqibo esichanekileyo. Ke namhlanje siza kubona indlela yokukhetha phakathi kwezi zimbini!
Olona phawu lukhulu lwe ishawa iphaneli kukuba imbonakalo yayo intle ngokwenene, kwaye inika abantu imvakalelo yokuba mde. Ekusetyenzisweni kwenkqubo kufanelekile, kwaye kunokuba kuhle kakhulu ukunqanda ukutshiza. Kwaye ishawa ephezuluiphanelis inemisebenzi emininzi, njengokufudumeza okungxamisekileyo okukhawulezileyo, ubushushu obuhlala buhleli, ukuthambisa, okunokuhlangabezana neemfuno zabantu abahlukeneyo. Kwaye ingxaki yobuninzi kunye nokuhlala okukhulu komhlaba kusonjululwa ngexesha lokufakwa.Kodwa olu hlobo lweshawaiphaneli ikwabiza kancinci. Umzekelo, ngokwexabiso, into ekumgangatho ophezulu kufuneka ibize kakhulu kunezixhobo zokuhlamba eziqhelekileyo. Ubume beshawaiphaneli intsokothile ngakumbi kunesakhiwo seshawari, ke ukuba kukho umonakalo okanye ukusilela kwinkqubo yokusetyenziswa, kunzima ngakumbi ukulungisa.
Ngapha koko, uninzi lweentsapho zisebenzisa ukubanjwa ngesandla intloko yeshawa, ikakhulu kuba ixabiso lokubanjwa ngesandla intloko yeshawa ayibizi kakhulu, kwaye xa sithetha nje, ufakelo nalo lulula kakhulu. Ewe, zininzi iintlobo zokubanjwa ngesandlaintloko yeshawa, ke zikwalungele igumbi lokuhlambela ngobukhulu obahlukeneyo. Olu hlobo lweeshawari lukwakulungele kakhulu ukulusebenzisa, kwaye uxinzelelo lwamanzi olufunekayo lincinci, ke ngoko ligcina amanzi. Nangona kunjalo, ineziphene zayo, oko kukuthi, inokuba nemisebenzi engaphantsi, kwaye xa uxinzelelo luphezulu, iya kuthi ngokulula ikhokelele ekutshizeni kwamanzi, yenze igumbi limanzi kakhulu.
Ke enyanisweni, ukuba awazi ukuba ukhethe njani phakathi kwezi zimbini, ungakhetha ngokobungakanani be igumbi lokuhlambela kunye neemfuno zakho. Nangona umsebenzi weshawaiphaneli ngenene ingaphezulu kweshawa ebanjwe ngesandla, oko akuthethi ukuba siyayidinga yonke imisebenzi yayo. Ngokukodwa ukuba kukho abantu abadala kunye nabantwana ekhaya kwaye abanalwazi lukhulu ngokusebenza kwayo, ke le misebenzi ayisebenzi, kwaye akunamsebenzi ukuyithenga ekhaya.